के अपाङ्गता भएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन् ?
अपाङ्गता भन्ने धेरै जनाको मानसपटलमा ह्विलचेयरमा या वैशाखीको सहाराले हिँड्डुल या सेतो छडीको सहाराले जीवीकोपार्जन गरिरहेको छवि आउन सक्छ । समाजमा अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न उपनामले जिस्क्याउने र समाजमा केही काम गर्न नसक्ने र सधैं अरूको दयाको भरमा बाँच्नेको रूपमा धेरैले धारणा बनाएका हुन्छन् ।
डब्लूएचओका अनुसार विश्वको जनसंख्याको १५ प्रतिशत हाराहारीमा मानिसहरू अपाङ्ग रहेका छन् । यो एक करोड १० लाखदेखि १ करोड १० लाख ९० हजारसम्म हुने अनुमान छ । यो अविकसित र विकासशील राष्ट्रमा झन् धेरै छ ।
विकासशील राष्ट्रभन्दा अविकसित राष्ट्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवनयापन गर्न धेरै गाह्रो छ । नेपालमा यो स्थिति हेर्दा धेरै नै कठिन रहेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् । नेपालमा डब्लूएचओले गरेको अनुमानमा ५ देखि १४ वर्षबीचका ६० हजारदेखि १ लाख ८० हजार बालबालिका रहेका छन् र युनिसेफको २०१६ को अध्ययनले ५ देखि १२ वर्ष बीचका ३०.६ प्रतिशत बालबलिकाहरू विद्यालयबाहिर छन् । यस अध्ययनले नेपालका १५ हजारदेखि ५६ हजार बालबालिका विद्यालय जान सक्दैनन् वा विद्यालय जाने वातावरण छैन भन्ने देखिन्छ । किन बालबालिका विद्यालय जान सक्दैन भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने पहिलो कुरा गरिबी र दोस्रो कुरा विद्यालय क्षेत्र र शिक्षा पहुँचयुक्त नहुनु नै हो ।
नेपालको संविद्यानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थाले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको भान हुँदैन ।
शिक्षामा पहुँच नहुनु नै बालबालिकाहरूको विकासको पहिलो चरणबाट वञ्चित हुन्छन् । समावेशी शिक्षा नभएकाले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले साङ्ग बालबालिकाजस्तै समान रूपमा शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छैनन् । जसले शिक्षामा पहुँच पाएका छन् उनीहरूको अवस्था पनि धेरै राम्रो भने छैन् । शिक्षामा पहुँच भए तापनि विभिन्ने अवरोधहरू दैनिक सामना गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि ठूलो भेदभावको सामना गर्नदेखि सहपाठी या अरू विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपर्छ । यसरी पूरा गरिरहेको शिक्षा धेरै कमले मात्र +२ या त्योभन्दा माथि पूरा गर्न सक्षम हुन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) अवलम्बन ग¥यो । यस महासन्धिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीका लगायत अन्य धेरै अधिकारका कुरा समेटिएका छन् । सीआरपीडी महासन्धिले कल्पना गरेअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउन पाएमा तथा अरूजस्तै सबै पक्षमा पूर्ण रूपमा बिना कुनै विभेद सहभागी हुन पाएमा मात्र उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन्छ भन्ने कुराको मान्यता राख्छ ।
अवस्था त तब जटिल हुँदै जान्छ जब शिक्षापछि रोजगारीका लागि ठूलो संर्घष गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्थाले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भने तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच नभएकै जस्तो लाग्छ, २०७५ को राष्ट्रिय आर्थिक गणना हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा कतै उल्लेख नै छैन । सूचना संकलन फारममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भनिए तापनि गणनामा कतै पनि उल्लेख नहुनुले के कुरा देखाउँछ भने राज्यले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू काम गर्ने शक्ति रूपमा नै नहेरीको देखाउँछ, तर तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४–२०७५ ले ९ लाख बेरोजगार देखाउँदा काम छोड्नु वा बेरोजगारीको समस्यामा अपाङ्गता, बिमारी र चोटपटकका कारणले ४.२ प्रतिशत श्रम बजारबाट बाहिर रहेको देखाउँछ ।
लोकसेवा आयोगले सकारात्मक विभेदको नीतिले ५ प्रतिशत सिट कोटा आरक्षण गरिएको छ । तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले पनि शिक्षाको राम्रो सुविधा नपाई रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कसरी लोक सेवाको परीक्षा सजिलै पार लाउँछन् । समय समयको समाचारहरूमा गलत विवरण बुझाएर अपाङ्गताको कार्ड लिएर लोकसेवा लडेको समाचार पनि सुनिइरहेको छ । यस्तो कुराको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, तर अहिले पनि कसले छानबिन गर्छ त्यो यक्ष प्रश्न नै रहेको छ ।
त्यसमा पनि सरकारी जागिर धैरै नखुल्ने भएको कार्यालयहरू पनि अधिकांश अपाङ्गमैत्री नहुनाले काम गर्न पनि धेरै कठिन हुने गरेको छ । साथै आफ्नो क्षमता देखाउन र क्षमताअनुसारको काम गर्न निकै कठिन हुने गुनासो रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलगायत गैरसरकारी क्षेत्र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राथमिकतामा त राखेका छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेर, तर पनि उपस्थिति धेरै कम छ । कारण प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । गैरसरकारी क्षेत्र केही राहत दिएको छ, तापनि त्यसमा पनि योग्यभन्दा शक्तिको पहुँचमा भएकाहरूले अवसर धेरै पाउने गरेका सुनिन्छ । केही वर्षअघिसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने मेला सञ्चालन हुने गथ्र्यो, तर अचेल त्यो पनि बन्द छ । औपचारिकता र कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम मात्र हुने भएकाले धेरै कामलाई निरन्तरता दिइएको पाइँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार रोजगारदाताहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले काम गर्न सक्दैनन् भनेर उनीहरूलाई काम दिन चाहँदैनन् । काम दिन्छु भन्नेले पनि खोजेजस्तो जनशक्ति पाउन सक्दैनन्, किनभने शिक्षा, तालिम र रोजगारयोग्य सीप उनीहरूसँग छैन वा लिन खोज्दा पनि पहुँचयुक्त वातावरण छैन ।
यसले के बुझिन्छ भने अहिले पनि समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै रहेको छैन । जसले गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा फरक प्रकृतिका काम गर्नु परिरहेको छ । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले यस्तै कुरा विशेष ध्यान दिएको छ ।
(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि अनुदान वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजजस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण वा औजार, अपाङ्गमैत्री सवारी साधन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, तालिम वा स्वरोजगारका लागि प्रयोग हुने मालसामान, यन्त्र, पार्टपुर्जा तथा कच्चा पदार्थमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार, अन्तःशुल्क, स्थानीय कर वा अन्य दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखी स्थापना भएका प्रतिष्ठानमा जडित यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विशेष रूपमा फेरबदल वा पार्टपुर्जा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिए बमोजिम कर छुट दिन सक्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने संस्थागत विद्यालयलाई सोबापतको रकम करमा छुट दिन सक्नेछ ।
(६) नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीहरूलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र तालिम वा रोजगारी दिने वा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने सामाजिक संस्था, व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा तालिम दिने उद्देश्यले स्थापना भएका वा तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, प्रचलित कानुनबमोजिम कर छुट दिन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ ।
विभिन्न कानुन मात्र बन्दैमा मात्र जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन । उल्लिखित सेवा सुविद्या उपभोग र उपयोग गर्न कति कठिन छ त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाह हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म यस्तो सूचना पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । स्वरोजगार हुन पनि धेरै गाह्रोे छ । संघहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै कठिन छ र वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋणका दिनका लागि सांगहरूलाई जसरी सजिलै पत्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् भुक्तभोगीहरू । यिनै विविध कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सकेका छैन्न् ।
राज्यले कानुनमात्र बनाएर वा सबैलाई एउटै डालोमा राखी व्यवहार गर्न मिल्दैन । समान व्यवहारको अवस्थाका लागि जनचेतना र शिक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैले सबैलाई बिनाभेदभाव कार्य गर्न सक्ने अवस्था भयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि गर्वका साथ सांग व्यक्तिहरूले जसरी आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्नेछन् । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विशेष गरेर लक्ष्यहरू ४, ८, १०, ११ र १७ मा काम गर्न सकियो भने मात्र यो लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । अबको अवस्था झनै जटिल बन्ने निश्चितजस्तै छ । कोरोनाको असरले श्रम बजारमा ठूलो असर गर्नेछ । रोजगारीहरू कटौटी निश्चित नै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो स्थितिबाट बचाउन राज्यले राम्रै पहल गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
उत्तर खोजिएको प्रश्न
कालापानी क्षेत्र नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र हो ।नेपालको दावी अनुसार यो सुदुरपाश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित छ । काली नदी बीच सीमा बनाउँछ । लिपुलेख भारतको उत्तराखण्ड राज्य र चीनको तिब्बत क्षेत्र बीचको सिमानमा हिमालयन पास हो , जुन नेपालसँग तिनीहरुको त्रिकोणको नजिक छ । नेपाल कालापानीको वास्तविक मालिक हो, जुन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारत र नेपालबीच १,८०० किलोमिटर (१,११८ माईल) खुला सीमा छ । दुबै देशका हजारौं मानिस काम र यात्राको लागि सीमाना वारपार गर्छन् । सन् २०१५ मा नेपालले भारतलाई सीमा नाकाबन्दी लगाएको आरोप लागाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त भएको थियो । भारतले सन् १९६२ को चीन भारत युद्धपछि लिपुलेक द्वार बन्द गरेपछि भोटियाको धेरैजसो व्यापार टिन्कर भएर बित्थ्यो । भारत र चीनले लिपुलेक द्वार फेरि खोल्न सहमत गरेपछि कालापानी क्षेत्रको बारेमा नेपालीहरुले सन् १९९७ मा नै यसबारे सोध खोज गर्न शुरु गरेका थिए ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिहंले भिडियो कन्फरेन्सिंगबाट मानसरोवर लिंकको उद्घाटन गरे । यो दुर्भाग्य हो कि बाटो एक्कासी जादूगरीले बनेको होइन , नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा नै प्रतिपोध गर्न सकेन । लिपुलेक उही क्षेत्र हो जसमार्फत भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा फिर्ता व्यापार मार्ग विकास गर्न सहमत भए । नेपालले भारत र चीनकोबीचमा भएको विवादित सम्झौतको कडा विरोध गर्दै यसलाई नेपालको सार्वभौमिकताको गम्भीर उल्लघन भएको बतायो । यद्यपि भारत र चीनले नेपालको आह्वानलाई ध्यान दिएनन् । नेपालले विवादित क्षेत्र भएर जाने भारतको सडकको उद्घाटन गर्न आपत्ति जनायो ।
विवादका बीच लिंक रोड भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा खोलिएको थियो । यसले भारतको उत्तराखण्डको धार्चुलालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखाको नजीकको लिपुलेक पासमा जोड्छ । लिपुलेक दर्राको दक्षिणी छेउ, जसलाई कलापानी क्षेत्र भनिन्छ, भारत र नेपाल बीचको विवादित क्षेत्र हो । गत वर्ष दुई देशहरुबीच नयाँ तनाव देखिएको थियो जब नोभेम्बरमा जारी गरिएको भारतको नयाँ नक्शाले कालापानीलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यमा देखायो र यसले नेपालको पीडालाई ठूलो पारेको छ ।
काठमाडौंमा भारतीय दूतावास बाहिर धेरै व्यक्तिहरु देशभरि कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्न जारी बन्दावन्दीको बाबजुद भारतीय ज़्यादतीबिरुद्ध प्रदार्शन गर्न भेला भएका थिए । नेपालीहरुले ब्याक अफ इण्डियामा ह्याशट्यागको साथ ट्विटपनि गरे । प्रहरीले शनिबार दर्जनौं युवा र विद्यार्थीलाई पक्राउ गर्यो र भारतीय रबैयाबिरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु पक्राउ पर्ने क्रम जारी नै छ । नेपाल सरकारले शनिबार बिज्ञप्तिमार्फत दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । र, भारतीय पक्षले कोरेना समस्या पछि बिबादित बिषयमा वार्ता गरौं भनेको छ । हो ? होला ? हुन सक्छ ? कुटनीतिक कुरा । तर, लिपुलेक सडकको उद्घाटन र सिंहदरबार परिसरमा चिनिया नागरिकहरुले गरेको उदण्डता एउटै समयमा - यो कुन कुटनीति भित्र पर्छ होला यो प्रश्नको उत्तर अविलम्व खोजिनु आवश्यक छ ।
महामारी अधिनायकवादी अभिष्ट पूरा गर्ने साधन नबनोस्
सर्वविदितै छ, यतिबेला सारा संसारको ध्यान कोरोना भाइरसमा केन्द्रीत छ । मृत्यु हुनेको संख्या विश्वभरी बढीरहेको छ । दिन प्रतिदिन यो महामारी कहिले र कसरी नियन्त्रण हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । नेपालमा पनि संक्रमण हुनेको संख्या बढ्दो छ । सकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न चौथो पटक जेष्ठ ५ गतेसम्म लकडाउन थपेको छ । त्यसपछि पनि के हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले कस्तो रुप लिन्छ भन्नेबारे यकिनका साथ भन्न नसकेपनि परीक्षणको दायरा वढ्दै जाँदा कोरोना भाइरस संकमित सख्या निकै बढ्ने सम्भावना नहोला भन्न सकिन्न । यो भाइरसको टेष्ट अहिलेसम्म नबढाएको थियो भने संक्रमित संख्या देखिँदैन थियो होला । मान्छेको मृत्यु भएपछि मात्र थाहा हुन्थ्यो कि उ कोरोना संक्रमित भएर मरेको हो । मुलुकमा कोरोना भाइरससँग मानिसहरु जुँधिरहेको बेला सँगसँगै सत्ता राजनीतिको घातक भाइरसको पनि सामाना गर्नु परेको छ ।
मुलुकमा आज दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार छ । यो कम्युनिस्ट कै नामको सरकार हो र , शक्तिशाली पनि । हुन त अक्सर शासकहरु संकटको मौका छोपेर अधिनायकवादी हुने धृष्टता गर्छन् । कतै यो सरकार पनि कम्युनिस्ट अधिनाकवाद तर्फ उन्मुख भैरहेको त छैन भन्ने आशंका आम जनमानसमा पर्न थालेको छ । कम्युनिष्ट अधिनायकवाद भनेको बहुसख्यक जनताले आफ्नो हितको लागि अल्पसंख्यक पुँजीवादीहरुमाथि गरिने शासन हो । तर, हाम्रो मुलुकमा यसको ठिक उल्टो छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा औलामा गन्न मिल्ने शासकहरु, दलाल, पुँजीपती र नोकरशाहीले मुलुकलाई अधिनायकवाद तर्फ लगेका छन् । अर्थात आफ्नो मुठीमा राखेका छन् । मुलुक कम्युनिष्ट अधिनायकवादको मर्म अनुसार हिडेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसको मर्म अनुसार नहिडेको कारणले सारा नेपालीहरुले दुःख पाइरहेको अवस्था छ ।
नेपाल मात्र होइन संसारभर जताततै स्वेच्छाचारी शासक र तानाशाहलाई अहिले यो महामारी शक्ति हत्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । ‘दी इकोनोमिष्ट’ को रिपोर्टलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा अहिले ८४ भन्दा बढी मुलुकले संकटकालीन कानून संक्रिय बनाएका छन् । जसलाई कार्यकारी प्रमुखलाई अतिरिक्त शक्ति प्रयोगको अधिकार दिएको छ । यो पङ्तिकार अन्य देशका शासकले गरेका स्वेच्छाचारी र निरंकुशता तर्फ केन्द्रीत नभई आफ्नै देशको शासकले संकटलाई अधिनायकवादी अभिष्ट पूरा गर्ने योजना बारे थप प्रष्ट गर्न चाहन्छ ।
नेपाल गणतन्त्र आउनु अघि सामान्त वर्गको प्रतिकका रुपमा रहेको राजसंस्थाले पटक–पटक जनताका अधिकार अपहरण गर्दै आयो । त्यसैले त्यसको अन्त्य पनि भयो । तर आज संघीय लोकतान्त्रत्मक गणतन्त्रको अभ्यास गरेको डेढ दशक पुग्दा पनि कुन वर्गले सबैभन्दा वढी फाइदा उठाएको छ ? वस्तुगत समीक्षाको आवश्यक अहिले बढेर गएको छ । आज संघीयतालाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार लागिएको छ कि छैन ? संविधानमा उल्लेख गरिएका तमाम मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयन भएको छ ? राज्यका विभिन्न निकायहरु ठिक ढंगले बढेका छन् ? किन कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि आम श्रमजिवी जनतालाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाइन सकिएन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कामय गर्न किन सकिएन ? गरिबी निवारण र रोजगारीका अवसरका वातावरण बनाउन किन हेलचेक्र्याइँ गरियो ? सरकारले स्वाधीन अर्थतन्त्रको सट्टा किन दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको बाटो समाइ रहेको छ ? यी सबै प्रश्नको एक एक गरी हरेक नागरिकले खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।
मुलुक यतिबेला कोरोनाको महामारीबाट कसरी जनतालाई सुरक्षित राख्ने र कसरी महामारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला हो । अझ आगामी १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । सरकार, संसद र राजनीतिक दल, नेता बजेटमा जुट्नु पर्ने बेला हो । तर सत्ता हॉक्नेहरुमा अध्यक्षको कुर्सी र अधिकार हेराफेरी चलेकै छ । अध्यादेश जारी गरेर ४ दिनमै फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिक प्रश्न खडा भएकै हो । तर उनले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्नुको सट्टा सत्ता र संसदीय दलमा वर्चस्वको हवाला लिएर म नै राज्य हुँ ,राज्य नै म हो भन्ने पुष्टि गर्न खोजे । यो उनको अधिनायकवादी यात्रा हो । उनको यात्रालाई त्यतिकै छोड्ने कि ब्रेक लगाउने सम्बन्धित पार्टी निकाय र आम जनताले गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला आएको छ ।
मुलुकको सत्तारुढ दल नेकपाले सचिवालयले अबका दिनमा पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार चल्ने, गुटका विभिन्न बैठकहरु नगर्ने, सवैले आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकताबद्ध भइ माथि बढ्ने घोषणा गरी वैशाख २५ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा सबै एजेन्डाहरुको बारेमा छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसको ४ दिनमै फेरि त्यो भन्दा उत्कर्षमा विवाद बल्झिएको छ । वैशाख २५ गतेको बैठकको लागि बसेको २४ गतेको सचिवालय बैठकमा पनि विवाद चर्कियो र बैठक चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिरिए । पार्टी अध्यक्ष ओली र इतर पक्षकोबीचमा चर्काचर्की भएपछि बैठकको अध्यक्षता छोडेर प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिए । प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले बैठकमा उठेका विधि र पद्धतिको कुरा सुन्न नसकेर ओली भाग्न खोजेको आरोपलमेत लगाए । प्रधानमन्त्री ओली एक पद एक मुख्य जिम्मेवारीको विपक्षमा रहेका छन् । तर बहुमत सचिवालय सदस्यहरु त्यसको कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा छन् ।
अन्त्यमा स्वार्थै स्वार्थको गठजोडले नेकपा मात्रै होइन मुलुकको भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा लडनुपर्ने बेलामा यस्तो हर्कत देखिनु अत्यन्त अशोभनीय हो । तसर्थ पार्टीका शिर्ष नेताहरुले दुई वर्षअघि पार्टी एकता गर्दा जे जस्ता आन्तरिक सहमति भएका थिए, त्यसको कार्यान्वयन गरी निकास खोज्न जरुरी छ । पार्टी गुटै गुटको झुण्डले चाँडै सखाप हुने देखिएको छ । तसर्थ, पार्टी सिद्धान्त, नीति, विधि र पद्धतिमा हिड्न जरुरी छ । नत्र बाँकी अढाई वर्ष पनि त्यतिकै सत्ताको शक्ति संघर्षले नबित्ला भन्न सकिन्न ।
बौद्धिक चिन्तनले हट्छ कोेरोनाको त्रास
-अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
हाल हामी सबै लगभग आरामको अवस्थामा छौँ । सबैजसो दौडधूपका काम अहिले छैन भन्दा हुन्छ । तनाव र उत्तेजनामै सँधै रहिरहने संसार नै अहिले लगभग आराममै छ । कोेरोना भाइरसले ल्याएको सनसनीपूर्ण वातावरणबाट अहिले संसारले चाहेर वा नचाहेर आराम लिएको छ । सबै कामलाई थाँती राखेर, रोकेर पूर्ण आराम सम्भव छ कि छैन त्यसको अध्ययन बिस्तारै होला । तर आराम गर्दैमा सबै ठीक हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन बरु यस्तो वखत हामीले आप्mनो स्वास्थ्यलाई भने ध्यान दिनु पर्छ ।
यस्तोबेला मन, मस्तिष्कलाई तन्दुरुस्त राख्न विशेष योग, ध्यान, पारिवारिक जमघट, स्नेह, माया, जीवन दर्शनकाबारे छलफल गरी सममय बिताउने गर्नु पर्छ । पूर्वीय दर्शनका धेरै विषय बस्तुहरु छन्, घरैमा सत्सँग, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन, गहन पुस्तकहरुको अध्ययन, भावी दिनका बारे जाने बुझेसम्मका सजिलोे अवतरणका उपायहरु, आत्म अनुशासन, आत्मानुभूति गरेर समय बिताउन सकिन्छ । आफ््नो दिनचर्यामा परिवर्तन गरेर मिठा गफ गरेर, संगीत, गीतमा भुलेर हाँँसेर हँसाएर जीवनको आयुलाई लम्ब्याउन सकिन्छ । पूजा, पाठ, गीता , महाभारत, रामायण जस्ता पवित्र ग्रन्थहरु वास्तवमा आपद् उद्धारक नै हुन् । किरियापुत्रीहरुलाई शोकबाट टाढा राख्न, लगभग क्वारेन्टाइनमा बस्दा गरुड पुराण सुनाउन त्यसै हाम्रा अग्रजहरुले लगाएका कहाँ हुन् र ? कोठामै बसेर कपासको बत्ती पारेर पनि अहिले हाम्रा आमा, दिदी बहिनीहरुले समय बिताउन र दुई चार पैसा पछिलाई कमाउन सक्छन्, जोहो गर्न सक्छन् । काम भएन भन्ने होेइन काम आपैmँँले खोेज्ने हो । बचेको समय करेसा बारीकोे गोडमेल गर्न सकिन्छ । घर, कोठालाई विशेष सरसफाई, डेकोरेशनमा थपघट, बूढा बूढीको अर्ति, उपदेश, आफन्तसँगको भेटघाट धेरै कामबाट आप्mनोे समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
ध्यान, योग भन्नु मानव संंशाधनको मूल जरो नै हो । न केवल व्यक्तिगत स्वस्थ व्यक्तिहरुको समूहबाट निर्मित समाजले त राष्ट्रको भावी गति नै निर्धारण गर्छ । क्रोध, हिँसा, तनाव, आवेगले व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज र समग्र मुलुक नै तहसनहस पार्छ । अस्थिर र असन्तुलित मानिसले गरेका निर्णयहरुले समाजमा धमिरा त लाग्छ नै, राष्ट्र पनि दीर्घरोगी हुन्छ । आर्थिक लगानी केवल बालुवामा पानी हाले सरह मात्र हुन्छ । सर्वसिद्धि गतिलो साधन योगलाई जीवनमा आत्मसात् नगर्दा समग्र समाज नै विकृत हुन पुग्छ । मनको चञ्चलताले सँधै भोग वृत्तितिर मात्रै उन्मुख हुँदा मानिसले आफ्नो ध्येय कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन ।
हामीले गर्व गर्नु छ कि हाम्रो मुलुक आयुर्वेदका प्रणेता धन्वन्तरी, योगका प्रथम चिकित्सक शिवजीदेखि पतञ्जलीसम्मको स्थल हो । आशा गराँैै कोरोनाले यहाँ टाउको नउठाओस् । साँच्चै लौकिक जीवनशैलीमा अष्टाङ्गयोगलाई सर्वसिद्धिकारक मान्ने बौद्ध धर्म दर्शनको स्थल पनि हो हाम्रो मुलुक । एकै श्ब्दमा भन्नु पर्दा सम्पूर्ण तपस्वी योग साधकहरुको केन्द्रीय स्थल हो आर्यावर्त क्षेत्र । श्रुति, स्मृति, ज्योतिषदेखि योगाभ्यासका प्रणेता जनक, पाणिनी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, वाल्मीकिको क्षेत्र नेपालमा यौगिक अभ्यासहरु हिजो आज समूहवद्ध भएर गर्ने गरिएका उदाहरण केही देखिए पनि योगसाधनाको अभियान हामी कहाँ कमै छ भन्नु पर्छ ।
विश्वमा अचेल धेरै किसिमका धर्महरु देखिएका छन् । हाम्रै सन्दर्भमा पनि सर्वधर्मको नारा सबैतिर देखिएको छ । विश्वमा जे जति धर्म सम्प्रदायहरु छन् सबैले योगलाई बिर्सेका छैनन्, सर्वसम्मत स्वीकार गरेकै छन् । धर्म सम्प्रदाय विशेषमा फरक हुन त सक्ला तर सभ्य र सन्तुलित जीवन सबैका लागि आवश्यक छ । राष्ट्रको सम्पत्ति भन्नु नै स्वस्थ मानव संशाधन हो । ‘मटेरियल’ र ‘मनि’ को प्रयोग पनि ‘म्यान’ले नै गर्ने हो म्यान चाहे ‘मेन’ होस् वा ‘ओमेन्’ । स्त्री र पुरुष दुवै सन्तुलित र स्वस्थ नभएसम्म सामाजिक, साँस्कृतिकदेखि आर्थिक र सर्वाङ्गीण विकास सम्भव छैन । योगका प्रमुख अङ्ग–यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि पुरुष र स्त्री दुवैका लागि अपरिहार्य छ ।
योग भन्नु कार्यकौशलता पनि हो । काम त सबैले गर्छन् । तर व्यवस्थित, परिणामदायी र दीर्घ समयसम्म दिगो हुने काम गर्ने व्यक्ति निकै कम हुन्छन् समाजमा, राष्ट्रमा । योग भन्नु जीवनदायी परमेश्वरसंगको जोड त हुँदै हो, शरीर सञ्चालनमा सहभागी हुने प्रकृतिसँगको मिलन पनि हो । प्रकृतिपरक हुन नसक्नेहरुको जीवन उराठिलो र पट्यारिलो त हुन्छ नै, जीवन आफ्नै लागि पनि बोझिलो बन्छ । अहिले विज्ञानले हारेको छ । विज्ञान भन्नु मानव मस्तिष्कको देन हो तर मानव मस्तिष्क भन्नु परमेश्वरको परम कृपा देन हो, आज मानिस आप्mनै दातालाई बिर्सँदै छ र त ज्यादै कष्ट भोगि रहेको छ । कोरोनाको सन्त्रासले संसार लक् डाउन होला भन्ने सायदै कसैले सोचेको हुँदो हो यस अघि ।
स्वस्थ, स्वफूर्त, उत्साही, भित्री चूरो र दरो हृदय भएको व्यक्तिले साहसी र अाँटिलो काम गर्न सक्छ, व्यक्ति सफल त हुन्छ नै असल पनि हुन सक्छ । समाज र राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने कार्यशैलीले विश्व समाज समेत प्रभावित हुने गर्छ । शान्त, धीर, वीर, शूरो र व्यक्तित्व विकासका लागि योग, पारमार्थिक साधना अनिवार्य नै छ ।
योगमा तत्पर रहन कुनै छुट्टै समय र साधन आवश्यक पर्दैन, चाहिन्छ केवल दृढ इच्छा शक्ति । समयको व्यवस्थापन गर्न जान्नेले प्रत्येक दिन आफूलाई योगमा समाहित गर्न सक्छ । कुनै ठूलो अध्ययन वा तर्क योगका लागि आवश्यक विषय होइन । ज्ञान, कर्म र उपासनामा दृढ रहने व्यक्ति योगी बन्न सक्छ, योगी भनु भेष वा अन्य कुनै पहिचान होइन । विकृतिबाट जोगिनु, जोगाउनुको अर्को नाम योगी हो । योगीको हृदय आकाशभन्दा फराकिलो हुन्छ र सागरभन्दा विशाल हुन्छ उसको मन । सचेत व्यक्तिलाई सरसफाइ गर्न वा हात धुन सिकाइ रहने विषय पनि होइन, यसबाट अवगत हुन्छ हामी कुन युगमा रहेछौं भनेर । राजधानीको प्रदूषण, धूवाँ, धूलोले वाक्क दिक्क भएर मास्क लगाउँदा हमीलाई व्ँयग्य भयो भनेर भन्नेहरु अहिले मास्क लाउँनु हात धुनू भनिरहेछन्, तर उनीहरुलार्ई के थाहा न मास्क पाइन्छ न पानी । धारो छैन धारो भएकोे ठाउँमा पानी छैन ।
बाहिर देखिने शरीर स्थूल शरीर हो । भोक, तिर्खा, निद्रा, आहार, विहारमा आर्धारित यो स्थूल शरीरभित्र रहेको अर्को सूक्ष्म शरीर पनि हुन्छ, त्यो हो मन । यसको वेग वायु भन्दा तीव्र हुन्छ, अनेकौंं चाहनाका कारण कहिलेकाँही जीवन अधुरो मात्रै होइन असन्तुलितका कारण जीवन असफल पनि हुन्छ । मनको चिकित्साको कुनै त्यस्तो ठूलो औषधि छैन । यदि छ भने त्यो योग चिकित्सा नै हो । तन, धन, मन सन्तुलित हुँदा नै जीवनलाई स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति हुन्छ । थौरै आवश्यकताको पूर्तिमा विशाल सन्तुष्टि राखी कर्मक्षेत्रमा अगाडि बढेर ऊर्जा शक्ति वचत गरी राष्ट्रनिर्माणमा प्रयोग गर्ने असल साधन मानव संशाधनको ढुकुटी भर्ने मूल कारक तत्व ध्यान र योग अभ्यास नै हो ।
अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता र चुनौती
-रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
अनलाइन प्रविधिका कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा केवल विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच भएका मूलतः शहरी क्षेत्रहरूका लागि यो उत्तम उपाय हो । २१ औँ शताब्दीमा आएर प्रविधिको विपक्षमा कुरा गर्नु मूर्खता हो तर बाध्यतालाई नकार्न मिल्दैन । यो त यथार्थ हो । प्रविधिमैत्री शिक्षण नयाँ ढाँचाको अध्यापन शैली भएकाले पनि नहुनु मामाभन्दा कानो मामा जाति भनेजस्तो चाहिँ हुन्छ । नेपालमा ग्रामीण क्षेत्र अभैm पनि टुकी युगमा रहेको तीतो यथार्थतालाई शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय लगायतका सबै शैक्षिक विषयमा सरोकार राख्ने निकायले मिहिन रूपमा सोच्नु आवश्यक छ ।
एकान्तवास (लकडाउन) को परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनार्थ सूचना जारी गरे पनि सायद नेपाल र नेपालीका समस्याका विषयमा ध्यान दिइएको देखिँदैन । वास्तवमा अभैm पनि नेपालमा प्रविधि जान्ने र प्रयोग गर्ने ज्ञान दूरदराजका नागरिकसँग छैन । यस कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन । शहरी क्षेत्रमा बिजुली पनि आपूर्तिको ठेगान हुँदैन । अहिलेकै अवस्थामा सबै विद्यार्थीलाई एकमुष्ट पारेर भेला गरी प्रभावकारी कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा पढाइलाई गति दिने कुरा हाम्रो नेपालका लागि अर्को समस्या रहेको देखिन्छ । यो कुरा एउटा कोठाभित्र बसेर निकालिएका सुझाव र तर्क गरेजस्तो सहज छैन । किनकि, ग्रामीण क्षेत्रको विकट परिवेश र चेतनाका विषयमा रहेर बालमनोविज्ञान र समाजमनोविज्ञानलाई हेर्ने कुरा छुट्छ । तब, उपाय केवल भन्नका लागि भनिएको ठहर्छ किनकि अनलाइन कक्षा सञ्चालनपूर्व त्यसको आधारभूत विकास हुनु आवश्यक छ ।
हाम्रो देशका अधिकांश शहरी क्षेत्रबाहेकका दूरदराजका गाउँमा रेडियोसम्म राम्ररी बज्न सक्दैन । विशेष गरेर बजारी केही क्षेत्रबाहेकमा बिजुलीको आपूर्ति निरन्तर हुँदैन । हावाहुरी, झरी–बादल भएर वातावरण फेरबदल भइसक्दा बत्ती जान्छ । त्यसो नभए पनि बत्ती जाने–आउने कुराको कुनै ठेगान हुँदैन । यो वास्तविक समस्यालाई नियाल्ने हो भने नेपाल सरकारले पहिला पूर्वाधारका विकास गर्ने अनि आदेश दिने गरेको भए त्यो तरिका मिल्थ्यो होला । पढाउँदै गयो– बिचैमा बत्ती जान्छ । सबैको घरमा इन्भटर, सोलार आदिको सुविधा त हुँदैन । परिणामतः पढ्ने पढाउनेलाई नै बाधा उत्पन्न हुन्छ । झिँजो महसुस हुन्छ । यो शहरी क्षेत्रमा केही हदमा वरदान भए पनि दूरदराजका लागि अभिशाप बन्छ ।
कोरोना महामारीले व्यापार, उद्योग, यातायात लगायतका विविध क्षेत्र जसरी नै शैक्षिक जगत्लाई प्रभावित तुल्याएको छ । मुखमा आइपुगेर अकस्मात् रोकिएको एसईई परीक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका पढाइ र परीक्षा रोकिएकामा चिन्ता बढ्दै जाँदा उत्तम विकल्प खोज्नु परिस्थितिगत बाध्यता पनि हो । शिक्षा र सरोकारवालाहरूको समर्थन तथा एउटै विकल्पका रूपमा अहिले ‘अनलाइन कक्षा’ सञ्चालनका कुरामा विचार राख्नेको एउटा लहर पनि छ ।
खुला विश्वविद्यालयले त विगतदेखि नै अनलाइन कक्षालाई नेपालमा राम्रै अभ्यास गरिरहेको बुझिन्छ । लकडाउनका कारण एसईई तहका लागि विभिन्न विकल्पका साथमा ‘जुम डट युस’, ‘टेलिभिजनद्वारा शिक्षण’, ‘रेडियो कार्यक्रम’ लगायतका विकल्पहरूको खोजी भयो । यसबाहेकका प्रभावकारी विकल्पले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा उतारचढाव ल्याइरहेको छ । कतै अनलाइन कक्षा सञ्चालनका प्रभावकारिताको खबर त कतै समस्याका खबर । उदाहरणका रूपमा लिँदा– धादिङ स्थित आदर्श बहुमुखी क्याम्पसले स्नातकोत्तर तहमा विगतदेखि नै प्रत्यक्ष कक्षाका साथमा ‘गुगल क्लास रुम’, ‘इज्जी क्लास’ लगायतका एप्सको माध्यमबाट पठनपाठनमा सहजीकरण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । दमक बहुमुखी क्याम्पस, दमकले पनि इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीलाई समेटेर ‘जुम डट युस’ द्वारा कक्षा सञ्चालनमा सकेसम्म लागि परेको त्यहाँका अध्यापक लीलाराम निरौला बताउनुहुन्छ । सामाखुशी इङ्गलिस बोर्डिङ
(सेब) स्कुल, काठमाडौँले अहिले कक्षा ८ देखि माथिका विद्यार्थीलाई यो एप्सद्वारा कक्षा सञ्चालन गर्दा सिकाइमा स्मरण हुने त्यहाँका निर्देशक युवराज थापाले बताउनुभयो । यो प्रविधिद्वारा ठूला–ठूला भेला, साहित्यिक समारोह भइरहेको देख्न पाइन्छ । ‘जुम डट युस’ एप्सद्वारा प्रश्न राख्न तथा लेखेर राखिएका सामग्री हेरेर सुझाव दिन सकिने हुँदा इन्टरनेट भएका शहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि वरदान बनेको छ । तर, यी प्रविधिहरूले गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, अकाउन्ट लगायतका विषयमा हुने हिसाबजन्य समस्यालाई हल गर्न त्यति सम्भव हुँदैन । यसका अतिरिक्त विश्वले अपनाइरहेका अभैm सहज र प्रभावकारी तौरतरिकाहरू भेट्न सके त्यसलाई पनि खोज्नु अबको आवश्यकता अवश्य हो ।
प्रविधिको वैकल्पिक तथा नवीन प्रयोगले प्रविधिमैत्री शिक्षको वातावरणलाई तय गर्दा यो फुर्सदको दुरुपयोग रोक्ने वरदान साबित भएको छ । चीन, इटालीमा दोहोरिएका घटनालाई हेर्दा सरकारले शिक्षण संस्थालाई सबैभन्दा पछि मात्र खोलिने भनेको विषय पनि जायज छ । दिनदिनै बढी भेला हुनुपर्ने स्थान शैक्षिक क्षेत्र हुन् । यसर्थ घरमा बसिरहँदा पढ्ने वातावरण भएमा पक्कै राम्रो कुरा हुन्छ नै । तर,इन्टरनेट चलाउने भए पनि सबैको आफ्नै राउटर त हुँदैन । सबैसँग गुणस्तरीय नेट पनि त छैन । त्यसै त आजभोलि धेरैले प्रयोग गर्ने हुँदा पनि यसको गतिमा द्रुतता हुँदैन । इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेकाहरूका लागि अनलाइन कक्षा चिन्ताको विषय हुन्छ । यो प्रविधि आकाशको फल आँखातरि मर भनेजस्तो मात्रै हुन्छ ।
गरिबी र मनोविज्ञान
ग्रामीण क्षेत्रका सबै विद्यार्थीका हातमा इन्टरनेट चल्ने स्तरको मोबाइल छैन । यसबाट तिनमा अवश्य पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । मोबाइल भए पनि यदि डाटा लिएर नै भए पनि कक्षामा सहभागी हुन्छु भन्ने हो भने यो अवस्थामा मोबाइलमा पैसा राख्नै मुस्किल छ । हाम्रो देशमा डाटा लिएर नेट चलाउने होइन, मोबाइलको नेटवर्क नटिप्ने थुप्रै ग्रामीण इलाकाहरू छन् । यो आकाशको फल आँखातरि मर मात्र हुन्छ । एकातिर पढाइ भइरहेको छ, अर्कातिर आफू सहभागी हुन नसक्दाको मनोवैज्ञानिक पीडा हुन्छ । यसले औपचारिक कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । परिणामतः इन्टरनेटको पहुँच नभएका कारणले नै विद्यार्थीहरूले पढाइ छोड्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । बजार–व्यापार, यातायात बन्द भएका कारण गाउँ–गाउँमा रिचार्ज कार्डको अभावमा दूरदराजका धेरै मानिसमा समस्या छ । सबैसँग अनलाइन रिचार्ज गर्ने ज्ञान र सुविधा छैन पनि । यदि कार्ड पाए पनि डाटा लिँदा त ठूलै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मूलतः गाउँका लागि, दूरदराजका लागि जेजे भनिए पनि उस्तो व्यावहारिक आधार छैन । त्यहाँधेरै हदमा अभिभावक पनि सचेत छैनन् । त्यसैले स्थानीय सरकार, अभिभावक तथा शिक्षकहरूको सहकार्यद्वारा सचेत तुल्याएर बालशिक्षाका चेतनामूलक सूक्ष्म कार्यक्रम, रेडियो शिक्षा गर्न सकिएला। किनकि, यदि त्यहाँ बाहिरतिर मान्छेहरू ओहोर–दोहोर नगर्ने हो भने कोरोनाको जोखिम कम छ।
उल्लेखित पक्षहरूमा इन्टरनेट र विद्युत आपूर्तिका समस्या सोचनीय छन् । अर्कोतर्पmबाट सोच्दा हामीले कहिलेकाहिँ भन्दै आएका छौँ– “बालबच्चाले मोबाइल र फेसबुकका कारणले पढाइ बिगारे ।” यदि सरकारले इन्टरनेट निःशुल्क बनाउने हो भने त्यो अर्को समस्या बन्न सक्छ । वास्तविकतामा सोच्ने हो भने इन्टरनेट अभिशाप होइन, वरदान साबित तुल्याउनु अभिभावक, शिक्षक तथा अग्रजको दायित्व हो । विद्यार्थीहरू इन्टरनेटबाट संसारको ज्ञानमा अद्यावधिक हुन पनि त पाउँछन् । अहिलेकै समयमा नकारात्मक व्यवहार र आचरणका विषयमा अभिभावक चनाखो हुनु चाहिँ अत्यावश्यक छ । विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्र र दूरदराजका विद्यार्थीका अवस्था समेतलाई ख्याल गरेर मात्र यो अनलाइन कक्षा वा अन्य विकल्पलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयीय तहमा निश्चित क्षेत्रका विद्यार्थीहरू पढ्न आउने हुँदा यदि सबैको हातमा सोही अनुकूलको मोबाइल हुने हो भने इन्टरनेट निःशुल्क हुँदा केही सम्भावना बढ्ला कि !
लकडाउनले प्रभावित अनौपचारिक अर्थतन्त्र
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक म्यानकिव ग्रैगरीले एउटा व्यक्तिले उसका धेरै इच्छाहरूको बीचमा उपलब्ध सीमित साधन र स्रोत तथा तिनीहरूको वैकल्पिक प्रयोगका कारणले सधैं ट्रेड अफको समस्या भोग्नुपर्छ भनेझैं अहिले विश्वका सम्पूर्ण देशहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन लकडाउनको अवधि बढाउने कि सीमित मात्रामा लकडाउन खोली आर्थिक क्रियाकलापहरू जारी गरी अर्थव्यवस्था जोगाउने भन्ने ट्रेड अफको समस्या भोगिरहेको छ । यो भाइरसबाट दीर्घकालसम्म जोगिन भ्याक्सिनको आविष्कारबिना सम्भव छैन र यो कार्य हुन अझै पनि केही समय कुर्नैपर्ने भएको छ । यो भाइरसको फैलावट यति धेरै र व्यापक छ कि यसको रोकथाम गर्ने कार्य निकै खर्चिलो भएको छ र यसलाई एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूले थेग्न सक्ने अवस्था छैन, जसमा नेपाल अपवादका रूपमा रहन सक्दैन ।
यो भाइरसको संक्रमणले देशको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिसकेको छ । यसका साथै हाम्रो आर्थिक कारोबारको व्यवहार, सामाजिक अन्तरक्रियाहरू र व्यक्तिगत आचार–व्यवहारमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने भएको छ । भारतका एक जना विद्वान्ले त यतिसम्म भनेका छन् कि हाम्रो जहासुकै थुक्ने हाच्छ्यँु गर्ने कार्य बन्दुकको गोलीभन्दा खतरनाक भएको छ, किनभने बन्दुकबाट निस्केको एउटा गोलीको सिकार एक जना मात्र हुन्छ भने हामीले जहाँसुकै थुक्ने र हाच्छ्युँ गर्ने कार्यले हजारांै भाइरस निक्ली सयौं मान्छे संक्रमित भई बढी मान्छेहरूको ज्यान जान सक्छ ।
भ्याक्सिन पत्ता नलागुन्जेल यो संक्रमणबाट बच्ने उपाय भनेको सोसियल डिस्टान्सिड नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरी नेपालले पनि तेस्रो पटकको लकडाउनको म्याद बढाइसकेको र यो भाइरसबाट समुदायमा समेत संक्रमण फैलिई (उदयपुरको घटना) बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएमा फेरि पनि यो लकडाउनको अवधि बढ्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यो संक्रमणको पहिलो सिकार भनेको असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू नै हुन् । सञ्चारमाध्यमहरू र अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए संविधानले प्रत्याभूत गरेको भोकमरीविरुद्धको अधिकारबाट त्यस्ता मजदुरहरू वञ्चित हुने थिए । दोस्रो पटकको लकडाउनको समय विस्तारपछि राजमार्गहरूमा सयौं किलोमिटरको दूरी हिँडेरै घर पुग्न यस्ता श्रमिकहरू धेरै निक्लिए ।
वैशाखकोे घामले तातिएको राजमार्गको पिचमा कामविहीन बन्दै भोकै र थकित रूपमा यसरी हिँडिरहेका श्रमिकहरूलाई अर्थशास्त्रको भाषामा माइग्रान्ट श्रमिकको नामले चिनिन्छ । कसैले भारी बोक्दै, कसैले अगाडि–पछाडि साना नानीहरूलाई हिँडाउँदै (कसैको खुट्टामा गरिबीको कारणले चप्पल समेत नभएको), दालमोठ–चिउरा चपाउँदै बेला–बेलामा हरियो खुर्सानी टोक्दै, बाटोमा कुनै दयावान्ले खान दिन्छन् कि भनी आस गर्दै, कुनै सञ्चारकर्मी (रेडियो वा टलिभिजनका पत्रकार) ले भेट्यो भने आँसु खसाल्दै आफ्नो व्यथा सुनाउदै हिँडेका मार्मिक घटनाहरू हामीले टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरूमा गत हप्ताभरि नै सुन्यौं, देख्यौं र पढ्यौं । खासगरी सहरी क्षेत्रमा सानातिना काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, सवारी चालक, सानातिना पसल चलाउने, विभिन्न कालिगढीका काम गर्ने, सामान डेलिभरी गर्ने र विभिन्न परियोजनामा ज्यामी काम गर्ने यस्ता मजदुरहरूले सहरिया जीवन सञ्चालनमा र ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जुन भूमिका खेलेको छ त्यसलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ । यिनीहरूलाई आवाजविहीन, अनिष्ट र शक्तिविहीन मानिसहरूको एक झुन्डका रूपमा लिई हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले एउटा भोट बैंकका रूपमा उपयोग ग¥यो । संघीय, राज्य र स्थानीय सरकार भनेको सहरका मध्यम वर्ग र गाउँका ठूलाठालुका लागि हो भन्ने कुरा यो घटनाले स्पष्ट गरिदियो । यी हिँडाइले भारतका एक जना पत्रकार सागरिका घोषले भनेजस्तै दुईवटा नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ । एउटा नेपाल सहर र गाउँका सभ्रान्त वर्गको र अर्को नेपाल यस्ता गरिब निमुखा मानिसहरूको ।
हामीले विगत सात दशकमा गरेको विकास प्रयासबाट अर्थव्यवस्थामा रहेको कालो र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने कार्य गरेनांै । अहिले पनि अर्थव्यवस्थामा, सबै आर्थिक क्रियाकलापमा सबैलाई गणना गर्ने हो भने ३८ प्रतिशत हिस्सा यस्तो अर्थ व्यवस्थाको रहेको पाइन्छ भने संस्थागत हिसाबबाट हेर्ने हो भने यसको अंश आधाको हाराहारीमा आउँछ । यस्तो आर्थिक क्रियाकलापहरू करको दायरामा नभएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता नभएको र राष्ट्रिय उत्पादनको गणनामा समावेश हुँदैन । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई यसको जिम्मा दिए तापनि यस्ता निकायहरूसँग एकातिर यस्ता व्यवसायको मात्रा र त्यहाँ काम गर्ने कामदारको तथ्यांक नै उपलब्ध भएन भने अर्कातिर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा न त प्रदेश सरकारले न त संघीय सरकारले अनुशिक्षण र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा यस्ता स्थानीय सरकारहरूले भौतिक विकासका साथै मानव विकाससम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्न लगाउनुपर्ने र यसबाट यस्ता संकटका समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण अन्त्य भएपछि राज्यले यस्ता श्रमिकहरूले गर्दै आएका कार्यहरूलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ त्यसबारे सोच्नुपर्छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई शून्य गर्न नसकिए तापनि यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले आक्रामक उपयाहरू भने कार्यान्वयन गर्ने पर्छ । अर्कातर्फ भारतको नीति आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अरविन्द पांगारियाले भनेजस्तै अर्थव्यवस्थामा रहेका सूक्ष्म उद्यमहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा भएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै यिनीहरूलाई साना र मझौला उद्यममा परिणत गर्ने नीतिहरू बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यहरूबाट आगामी दिनहरूमा यस्तो समस्या कम मात्रामा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरोनाको त्रासले सिर्जना गरेका सामाजिक अवसर
-डा. रितराज खड्का
विश्वले नै अहिले कोरोना भाइरसको महामारी सहिरहेको छ । सहरका बाटाघाटा सुनसान देखिन्छन् । नेपाल पनि अपवाद बन्न सकेन । मानिसहरु अहिले घरभित्र बस्न बाध्य छन् । अहिले भइरहेको लकडाउनको अभ्यास महामारीबाट जोगिने उत्तम तरिका रहेको विश्व स्वस्थ्य संगठनलगायत जनस्वास्थका जानकार विज्ञहरुको ठम्याइ छ । त्यसैले हामी आफैं पनि सचेत हुनु आवश्यकमात्र हैन अपरिहार्यसमेत हो ।
महामारीको रुप लिऐको यतिका महिना बित्दा पनि यस रोगको वैज्ञानिक औषधि पत्ता लगाउन नसक्नु, विज्ञहरुबाट दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ धारणा आउनु पनि सिङ्गो समुदायको डर र चिन्ताको कारण बनेको छ । अर्को, यो भाइरसको प्रारम्भिक प्रमुख स्रोत के हो भन्ने थाहा नपाउनु पनि वैज्ञानिक जगतको टाउकोको दुखाइ आश्चर्यको विषय बनेको छ । यस्को स्रोत पत्ता नलाग्दासम्म कोरोना भाइरसविरुद्ध बन्ने नयाँ भ्यासिनमा पनि प्रश्न चिन्ह रहिरहन्छ ।
कोरोना भाइरसले विश्व स्तरमा विनाशकारी रुप लिँदै गर्दा हाम्रोजस्तो समुदायलाई भने केही सकारात्मक पाठ सिक्ने अवसर पनि मिलेको छ । चिकित्सकका हैसियतले आज म केही सामान्य तर मानव जीवन स्वस्थ राख्न आवश्यक विषयका बारेमा बताउने जमर्को गर्दैछु जुन अहिले समुदायले अपनाउँदै पनि गएको छ ।
१. मास्क वा रुमालले मुख छोप्ने
वातावरणमा प्रतिदिन प्रदूषण बढिरहेको छ । यस्को प्रभाव मानव जीवनमा प्रत्यक्ष पर्छ । उदाहरणका रुपमा लकडाउन हुनुभन्दा पहिला र भएको एक महिनापछिको अवस्था हेर्दा अहिलेको वातावरणीय स्वच्छता मापन अंकलाई लिन सकिन्छ । प्रदूषणबाट बच्न र स्वास्थ रहन घरबाहिर निक्लिँदा मास्क वा रुमालले मुख छोप्नु उत्तम उपाय हुनसक्छ । अहिले भोगिरहेको महामारीले यो सिकाएको छ । यो सकारात्मक पाटो हो । नजिकैको मानिसबाट रोग आफूलाई नसर्न र आफूलाई कुनै रोग भए अरुलाई सर्न नदिन पनि मास्क लगाउने, बोल्दा या हाच्छिउँ गर्दा रुमालले मुख छोप्ने बानी अहिलेको परिस्थितिले बसाएको छ ।
२. साबुन वा खरानी पानीले मिचीमिची हात धुने
सामान्यतः हामी सबैले साबुन पानीले हात धुने त गर्छौँ तर कसरी र कति पटक भन्ने धेरैलाई थाहा थिएन । यो महामारीपछि साबुन पानीले मिचीमिची हात धुने बानी बसालेको छ । विश्व स्वास्थ संगठनअनुसार उचित तरिका अपनाएर (विश्व स्वस्थ संगठनको हात धुने तरिका) दिनमा कम्तीमा पनि १८ पटक हात धुनुपर्ने प्रावधान त पहिलादेखि नै थियो । तर, हामीले दिनमा १८ पटक उचित तरिका हात धुने गरेका थियौं त ? आउँदा दिनमा निरन्तरता दिइयो भने हात धुने बानीले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
३. ह्यान्ड स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने
ह्यान्ड स्यानिटाइजर हातमा भएका आँखाले देख्न नसकिने कीटाणु मार्न नभई केही समय निस्क्रिय बनाई राख्न प्रयोग गरिने अल्कोहलयुक्त झोल हो । यस्को प्रयोग हाम्रो समाजमा हुँदै नभएको त हैन तर धेरै कम मानिसले गरेको पाइन्थ्यो । अहिले भने यसको प्रयोग गर्ने बानी ह्वात्तै बढेको छ । यो राम्रो बानीको विकास हो । परन्तु, यसको प्रयोग गर्ने तरिका अहिले पनि धेरैलाई थाहा नभएको हुनसक्छ । स्यानिटाइजरको प्रयोग विशेषगरी घरबाट बाहिर निस्कनु भन्दा र घर पस्नुभन्दा पहिले गर्नु उत्तम मानिन्छ । यसको प्रयोग व्यक्तिले गर्ने क्रियाकलापमा भर पर्ने हुन्छ । धेरै मानिसको संसर्ग हुने काम वा ठाउँ जस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा, कागजको नोट धेरै चलाउनेजस्ता काम गर्नेले वा सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गरिसकेपछि ह्यान्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य हुन सक्छ । तर स्यानिटाइजर धेरैपटक प्रयोग गर्नु राम्रो मानिँदैन । उचित र आवश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
४. सामाजिक दूरी कायम गरी बस्ने
सामाजिक दूरीलाई कायम गरी बस्नु कोरोना भाइरसको महामारीमा मात्र हैन समाजमा देखिने विभिन्न सरुवा रोगबाट बच्ने पनि उत्तम उपाय हो । सरुवा रोगहरु समुदाय, परिवेश, हावापानीमा भर पर्छ । नेपाली सामाजमा धेरै येस्ता सरुवा रोग हामीले जानी नजानी अरुलाई वा अरूबाट आफँलाई सार्छाै । रुघाखोकी, क्षयारोग, हेपाटाइटिस, मुखमा आउने विभिन्न किसिमका भाइरल इन्फेक्सनआदि यस्ता रोग धेरै छन् । यी रोगहरुबाट बच्न र बचाउन सार्वजनिक स्थानमा सामाजिक दूरी कायम गर्नु उत्तम र सजिलो तरिका हो । यसलाई निरन्तरता दिइएमा समुदाय स्वस्थ राख्न मद्दत मिल्नेछ । यसरी सामाजिक दूरी कायम राख्न कोरोना भाइरको महामारीले सकारात्मक बानी पारेको छ ।
५. योग र ध्यान गर्ने
चिकित्सा क्षेत्रमा योग र ध्यानलाई महत्वपूर्णरुपमा हर्न थालिएको छ । विश्व स्वस्थ्य संगठनले केही वर्षअघि स्वास्थ्यको परिभाषा परिवर्तन गरी योग र ध्यानबाट प्राप्त हुने मानसिक स्वस्थ्यलाई मान्यता दिएको छ । अहिले विश्व चिकित्सा क्षेत्रमा योग र ध्यानलाई महत्वका साथ अपनाइएको पाइन्छ । मानव शरीर भौतिकरुपमा मात्र हैन मानसिकरुपमा पनि उत्तिकै स्वस्थ हुनु जरुरी छ । अहिले लकडाउनको समयमा मानिसलाई घरमै बसेर योग र ध्यान गर्ने समय जुरेको छ । योग र ध्यानलाई अहिलेजस्तै आउँदा दिनमा पनि निरन्तरता दिन सके समुदायलाई नै मानसिक रोगबाट जोगाएर स्वस्थ रहन मद्दत मिल्छ ।
कोरोना भाइरसको सामना गर्ने क्रममा विकास भएका यी सकारात्मक बानीहरूलाई संस्कार बनाएर निरन्तरता दिऊँ ।
लकडाउनमा अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता
अहिले विश्वभरि नै अदृश्य सरुवा रोग फैलिएको छ । भाइरस फैलने डरले विश्वका धनी–गरिब सबै मानिस त्रसित छन् । संक्रमण फैलन नदिन जल, स्थल, वायुु मार्ग बन्द गरिएका छन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान पाइँदैन । विश्व नै ठप्प । कारोना भाइरस चीनबाट सुरु भई युरोप तथा अमेरिका बढी फैलिएको छ । विश्वभरि फैलिएको कोरोना विषाणुले लाखौंको ज्यान लिएको छ । अहिलेसम्म विषाणु रोक्न कुनै औषधि, खोप पत्ता लागेको छैन । सर्वत्र त्राहिमाम छ । संक्रमण फैलने डरले साथी, भाइ आफन्त भेट्ता डराउनुपर्ने अवस्था छ । सबै संशकित । एक घरबाट अर्को घर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान बन्छ । मान्छे आ–आफ्नै घरमा बन्दी भएका छन् । सरुवा रोग फैलन नदिने उद्देश्यले गरिएको लकडाउनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त छ । त्यति मात्र कहाँ हो र ? लकडाउनका कारण देशका करिब ३५ हजार विद्यालयमा अध्ययनरत ६३ लाखभन्दा बढी बालबालिका प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
एसईई परीक्षा रोकिँदा त्यतिमात्र कहाँ हो र एसईई परीक्षा रोकिँदा ५ लाख बालबालिका अन्योलमा छन् । ५ लाख बालबालिका अन्योलमा छन् । महाव्याधि कहिले नियन्त्रण हुने, विद्यालय कहिले खुल्ने, पढाइ कहिले हुुने ? अनिश्चित छ, जसका कारण बालबालिकाहरू शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित भएका छन् । खेल्ने, चल्ने, विद्यालय जाने उमेरका कलिला नानीहरूलाई लकडाउनले सबभन्दा धेरै कठिनाइ भएको छ । घरभित्रै बस्नुको पीडा खपिसक्नु छैन । घरभित्रै छेकेर राख्दा चलिरहनुपर्ने चञ्चल बालस्वभाव कुण्ठित भएको छ । मुस्कुराइरहने अनुहारहरू मलिन छन् । साथीसँग भेटघाट गर्न, खेल्न नपाउँदाको पीडा हामी केवल अनुमान मात्र गर्न सक्छौं । खाऊँखाऊँ लाऊँलाऊँ गर्ने उमेरका बालबालिकासँग अहिले न पुस्तक, न स्कुल, न खेल सामग्री नै छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? दिनभर काम गरी हातमुख जोड्ने गरिब, मजदुरका घरमा खाने कुरा सकिएको छ । तिनका बालबालिका भेकभोकै छन् । सरकारले राहत दिई मलमपट्टी लगाई थुमथुम्याउन खोजेको छ । तर, खाऊँखाऊँ लाऊँलाऊँ भन्ने उमेरका बालबालिकालाई त्यसबाट राहत भएन ।
लकडाउनकै बीचमा पनि अब बिस्तारै सुरक्षित तरिकाले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै जानुपर्छ । अन्यथा आगामी वर्ष झन् ठूलो समस्या उत्पन्न हुनेछ । भोकमरी लाग्न सक्छ । भौतिक दूरी कायम राख्ता संक्रमण फैलने सम्भावना कम हुन्छ । तर, विद्यालयमा सधैं भीडभाड हुने हुँदा दूरी कायम राख्न सकिँदैन । अतः विद्यालयहरू महाव्याधि नियन्त्रणमा नआउँदै शिक्षक–विद्यार्थीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ । स्थिति सामान्य हुन समय लाग्ने अनुमान गरेरै होला, शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक सत्र भदौबाट सुरु गर्ने कुरा बताउनुभएको । मन्त्रीले भने पनि भदौबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने कुरा बताए पनि महाव्याधि कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले विद्यार्थीलाई विकल्प दिई पढाई सुचारु गर्नुपर्छ । कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको भरण हामी पछि पनि गर्न सक्छांै, तर विद्यार्थीको पढाइमा पुग्ने क्षति हामी कहिल्यै पूर्ति गर्न सक्तैनौं । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखी शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल वैकल्पिक विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीको समस्या अलि भिन्न छ । सहरी क्षेत्रका बालबालिका कोठामा सीमित छन् । पढ्न–लेख्न, साथीसँग भेट्न, खेल्न, चल्न नपाउँदा टेलिभिजन, मोबाइल र कम्प्युटरमा दिन बिताइरहेका छन् । अपराधका दृश्य, अश्लील च्यानल, युट्युब तथा च्याटिङमा आकर्षित हुँदै गएका छन् । यसबाट भविष्यमा बालमनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्दो हो ? त्यो पछि थाहा हँुदै जाने नै छ, तर अहिले नै उनीहरूमा बोलाउँदा झर्कने, रिसाउने जस्ता आक्रामक व्यवहार देखाउन थालेका छन् । यो राम्रो लक्षण होइन ।
अमेरिका, डेनमार्कजस्ता मुलुकका विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू घरै बसी पढिरहेका छन् । गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, हाम्रा अलपत्र छन् । अब हामीले पनि देशभरका बालबालिकाहरूलाई तत्काल विद्यालयमा जम्मा गरी पढाउने परम्परागत पद्धतिको सट्टा दूर कक्षा सञ्चालन गरी पठनपाठनको व्यवस्था हामी सबै मिली गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमणको अन्त्य होला र विद्यालय सञ्चालन गरौंला भनेर कुरेर बस्न हँुदैन । त्रासको अन्त्य त्यति छिटो देखिँदैन । स्थिति सामान्य हुन समय लाग्न सक्छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वसक्रियता लिनुपर्छ । सम्बोधन गर्नैपर्छ । बालबालिकालाई घरैमा बसी पढ्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि वैकल्पिक विद्यालय कक्षा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
१. लकडाउनपछि सहरी क्षेत्रका केही सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यो धेरै राम्रो सुरुवात हो । तर, सम्पूर्णतामा हाम्रो मुलुक त्यहाँसम्म पुगिसकेको अवस्था छैन । राजधानी काठमाडांैमा पनि सबै अविभावकसँग ल्यापटप, वाईफाई सुविधा छैन । ब्यान्डविथ कमजोर छ । बिजुली, वाईफाई घरी जाने घरी आउने गर्छ । ब्याकअप छैन । यसका लागि भरपर्दो बिजुली, वाईफाईसहित, विद्यार्थीसँग कक्षागत पाठ्यपुस्तक, रिफ्रेन्स पुस्तक, कक्षागत विद्यार्थी उपयोगी सिकाइ सामग्रीहरू अनलाइनमा उपलब्ध हुन जरुरी छ । त्यतिमात्रले पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्तैन । विद्यार्थी तथा अविभावक पनि प्रविधिमैत्री हुनपर्छ ।
लकडाउन सुरु भएपछि राजधानीका केही सुविधासम्पन्न कलेजले अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि विद्यार्थी सहभागी न्यून रह्यो । किनकि उनीहरूसँग या त पूर्वाधार थिएन वा चलाउन सक्ने खुबी । त्यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने अहिले नै गाउँगाउँका विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सम्भव छैन । अब हामीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिँदै जाने र सो सुविधा उपलब्ध नहुने विद्यार्थीहरूका लागि अन्य विकल्प सुनिश्चत गर्नुपर्ने देखियो ।
२. टेलिभिजन विद्यालय कक्षा ः अहिले देशको प्रायः सबै भूभाग र धेरै जनसंख्यासम्म टेलिजिनको पहुँच छ । आज घरघरमा टेलिभिजन छ । वाईफाई सुविधा नभएको दुर्गम गाउँका घरमा पनि टिभी छ । डिस होम र अन्य स्याटेलाइटमा आधारित सेवाले पहुँचमा विस्तार गरेको छ । अब विद्यालय कक्षाहरू टेलिभिजनबाट पनि सञ्चालन गरौं । घरकै टिभीअगाडि बसी विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । सोका लागि एउटा टेलिजिन च्यानलबाट एउटा कक्षा सञ्चालन गरौं । सो कामका लागि १० वटा टेलिभिजन च्यानललाई एक–एकवटा कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिई टेलिभिजन कक्षा तत्काल सञ्चालन गरौं । सोका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अग्रसरता लिई आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुनेछ । टेलिभिजन कक्षामा दोहोरो संवाद नहुने भएकाले सरल भाषामा बिस्तारै दोहो¥याउँदै कक्षा सञ्चालन गरी सोको अडियो युट्युबजस्ता सोसियल साइटमा पनि राखौं । धेरै उपयोगी हुनेछ । नबुझेको कुरा विद्यार्थीहरूले पछि पनि दोहो¥याएर हेर्ने र बुझ्ने अवसर पाउनेछन् ।
३. रेडियो कक्षा : अहिले देशैभर एफएम रेडियोहरू सञ्चालनमा छन् । दुर्गममा रेडियोको आवाज सुनिन्छ । अतः अनलाइन कक्षा र टेलिभिजन कक्षाबाट पनि समेट्न नसकिने विद्यार्थीहरूका लागि रेडियो कक्षाले समेट्न सकिन्छ । अतः एफएम तथा अन्य रेडियोबाट पनि गरौं । जहाँ जे–जस्तो माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीसम्म पुग्न र सिकाउन सकिन्छ, त्यो गरांै । विद्यार्थीको ज्ञान बढाऊँ ।
४. वेबसाइट कक्षा सञ्चालन : सबैका लागि शिक्षा भन्ने नारा कार्यान्वयनका लागि शिक्षाको उज्यालोबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित हुन नदिन माथि प्रस्तुत विकल्पको अतिरिक्त वेबसाइटमार्फत पनि सरकारले अध्ययन–अध्यापन गराउन सक्छ । सोका लागि शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयमा विद्यालय शिक्षका लागि निर्धारित सबै कक्षाको पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, अनलाइन तथा टिभी कक्षाको अडियो तथा विद्यालय शिक्षा उपयोगी अन्य सामग्रीहरू वेबसाइटमा राखी चाहेको बेला सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकले हेर्न, पढ्न तथा डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । यस्तो सुविधा वेबसाइटमा उपलब्ध गराउँदा विद्यालय सञ्चालन भएपछि पनि शिक्षक, अविभावक तथा विद्यार्थी सबैका लागि निकै उपयोगी हुनेछ । वेबसाइट निर्माण र टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन गर्दा ब्रेल लिपिबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्न भुल्न हुँदैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाविद्हरूको विज्ञ समूह र आईटी विज्ञ समूह गठन गरी तत्कालै वैकल्पिक विद्यालय कक्षा सञ्चालन गरांै । विद्यार्थीसम्म पुग्न सम्भव सबै विकल्प उपयोग गरौं । अनलाइन, टिभी र रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्दा लाखौ विद्यार्थी, अभिभावक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । भविष्यमा पनि आइपर्ने संकट तथा व्याधिमा पनि विद्यालय सुचारु राख्न ठूलो सिकाइ हुनेछ । यस किसिमको सिकाइबाट मुुलुकले शिक्षाक्षेत्रमा गतिलो फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ ।
संगठन व्यवस्थापनमा लकडाउनको प्रभाव
आजको दिनमा विश्वका करिब एक चौथाई जनसंख्या कुनै न कुनै रुपमा लकडाउनको कारणले गर्दा घर भित्र बस्न बाध्य भएका छन् । धेरै संघ संस्थाका कर्मचारीहरु घरबाटै काम गरीरहेका छन् । सायद सारा बिश्वनै एकै पटक यसरी लकडाउनको अवस्थामा पुगेको इतिहासमा बिरलै पाउन सकिन्छ । यस लकडाउनले संगठनको ब्यबस्थापकिय सिद्धान्त, र कार्य शैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्नसक्ने देखिन्छ । परम्परागत ब्यबस्थापकिय शैलीका कतिपय सिद्धान्तलाई यसले बिस्थापित गर्ने छ । अब ब्यबस्थापकले पनिआफ्नो ब्यब्स्थापकिय गुण र शैलीमा समयनुकुल सुधार गर्न सकेन भने आउट डेटेड हुन सक्छन । कोरोना भाइरसको कारणले उत्तपन्न संकटको कारणले निजी, सार्वजननिक तथा विकाससंग संमव्धित संगठनहरुले काम गर्ने परमपरागत तौरतरिकामा उथलपुथल आउन सक्छ । संगठनहरुमा विशेष सीप र दक्षता भएको नया किसिमको काम थपिन सक्छ भने अर्कोतर्फ कतिपय परमपरागत रुपमागर्दै आएका कामहरु कटौतीमा पर्न सक्छन् ।
विश्वव्यापी कोरना संकटको कारणले ल्याएको जागरणले सार्वजनिक तथा निजी संगठनको प्राथमिकता र उद्धेश्यमाथि पनि प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । संकट व्यवस्थापनमा संगठनहरुले खेलेको भुमिकाले संगठनको सफलता र असफलताको मापन गर्दे नेतृत्वको मुल्याकनहुने छ । सुचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत छिटो र सहज सेवाप्रवाह गर्न जनदवाव सृजना हुने छ र परम्परागत रुपमा गर्ने प्रक्रियामुखी कार्यलाई न्युनिकरण गर्ने छ । संगठनमा छिटो छरितो प्रकियामार्फत प्राप्त नतिजाको मुल्याकन हुने भएकोले प्रकिया गौण हुन जानेछ । हाल विश्वव्यापि रुपमा प्रचलनमा रहेको अफिसको काम घरवाट भन्ने अभ्यासले संगठनमा पार्ने प्रभावलाई वृहत रुपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
परम्परागत संगठनिक संरचनाको स्वरुप र सिद्दान्तलाई चुनौतीः
हुनत सुचनाप्रविधिको विकास र परिबर्तित कार्यशैलीले ब्यबस्थापनमा परम्परागत संगठनिक संरचनाको स्वरुप र सिद्दान्तलाई सुरुदेखिनै चुनौती दिदै आएको थियो । परम्परागत संगठनिक संरचनाको स्वरुप र सिद्दान्तलाई चुनौती दिन सक्ने गरी कुनै व्यावहारिक प्रयोग हुन सकिरहेको थिएन । कोरोना भाइरसकोले उत्पन्नभएको लकडाउन र अफिस बाहिरबाट काम भन्ने अभ्यासले यसलाई बृहत रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको हो । संगठनको ठाडो स्वरुप, च्याप्टो स्वरुप, फुटबल आकारको स्वरुप, म्याटिरीकस आकारको संगठन यी सबै संगठनको स्वरुपहरु संगठनको रणनीति बनाउने क्रममा कागतमा मात्र सीमित हुनसक्ने सम्भावना छ । यसले पद्सोपान, कर्मचारीको स्थायित्व, अधिकार र उत्तरदाइत्वलाई पुनपरिभाषित गर्न सक्छ । अब कामगर्ने दौरानमा प्रक्रियालाई भन्दा नतिजालाई महत्वदिन सक्छ । कर्मचारीको कामलाई नतिजा संग हेरिने छ र कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने लाई उप्लाव्धिभन्दा पनि जहाँ बसेर कार्य गरे पनि के नतिजा प्राप्तको लागि आफ्नो समय बेतित गर्नु भयो भन्ने कुराले महत्व पाउन सक्छ ।
अहिलेको कोरोना भाइरसको चुनौतीले संगठनको अस्तित्वलाई मात्र होइन मानब सभ्यताको अस्तित्वलाई नै चुनौती खडा गरेको छ । अब संगठनमा हरेक कर्मचारीको कार्यलाई पुनपरिभाषित गर्ने सक्छ र संगठनमा को ठुलो को सानोभन्दा पनि भर्चुअल संगठनिकको अबधारणाले महत्व पाउन सक्ने देखिन्छ । पदले भन्दा पनि कामको प्रकृति, सिप र ब्यबस्थापकीय कार्य शैली र क्षमताले कर्मचारीको महत्व दर्शाउने छ । अब स्वव्यवस्थापन, स्वमूल्यांकनको अवधारणा संगठनमा वृहद् रुपमा लागू हुने छ ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाहको तरिकामा आमूल परिवर्तन हुनसक्छः भनिन्छ कुनै पनि विपदले खाली विनासमात्र लिएर आउदैन यसले बिकास पनि लिएर आउछ । ब्यबस्थापकले भनौ वा सरकारले बर्षौदेखि गर्न नसकेको कामको सुरुवात र नबप्रबर्तन विपद ब्यबस्थापनको क्रममा लागु गर्न सकिन्छ । बिश्वमा यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन । जब चिनको वुहान सहरमा कोरोना भाइरसले बिकराल रुप लिदै थियो त्यतिबेला राज्यले पुरा शहरलाई लकडाउन गरि दुर शिक्षामार्फत बालबालिकालाई शिक्षा, दृतगतिमा अस्पतालको निर्माण, मोवाइल एपमार्फत सम्पुर्ण जनताको स्वास्थए सुचनामाथिको पहुच र स्वास्थ्य सेवाको उप्लाब्धता, आधारभूत खाद्य समाग्रीको आपूर्तिमा सहजताको त्रममा सूचनाप्रबिधिको प्रयोग मार्फत जसरी लाखौ जनतालाई सार्बजनिक सेवा प्रबाह गर्न सक्यो त्येसैले आमजनतालाई सार्वजनिक सेवा राज्यले कसरी छिटो, छरितो, सुलभ, र गुणस्तरिय सेवा प्रबाह गर्नु पर्दछ कुरा सारा विश्वलाई सिकाई दिएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संगठनलाई एक किसिमको जनदबाब सिर्जना गर्न सक्छ । संकट र कठिन परिस्थितिमा राज्यले कसरी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने क्षमता राख्दछ, कसरी व्यवस्थापकिय क्षमताको प्रर्दशन गर्न सक्दछ भने कुराले सरकारको सफलता र असफलताको निर्धारण राख्दछ ।
हालै नेपालमा संकट व्यवस्थापनमा आवश्यक पुर्ब तयारी गर्न नसकेको, आधारभुत सामाग्रीको पुर्व तयारी गर्न नसकेको भनेर विभागिय मन्त्रिको व्यापक आलोचना हुनु र बरु सो पद प्रतिपक्ष्।को कुनै अर्को सांसदलाई दिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठनुले पनी यो कुरालाई पुस्टाई गर्दछ । सार्बजनिक सेवाको प्रभावकारिताले सरकारको सफलताको मापन गर्ने आधार तयार हुने छ । अब राज्यले आम जनतालाई हातधोएर खाने गरौ भन्नको लागि लाखौ खर्च गर्न पर्दैन । अबको आबस्कता भनेको हरेक गाउ टोलमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नागरिक सुशाशन प्रभावकारी छ कि छैन भनेर मापन गरिने छ । सार्वजनिक संगठनको प्राथमिकता, कार्यशैली, र जन अपेक्षाविच व्यापक अन्तरसर्घष हुने छ ।
ब्यबस्थापकको दक्षता र कार्यशैलीमा नविनतम गुणको आबश्यकताः
सीमित स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत अधिकतम नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भएर मात्र सफल ब्यबस्थापक हुन् सकिदैन । संगठन भित्र आकस्मिक रुपमा आउन सक्ने संकटको पूर्व अनुमान, संकट समाधान गर्न सक्ने गरि गरिएको पूर्व तयारी, र संकटको घडीमा संगठनको अस्तित्व बचाउन सक्ने व्यावस्थापकिय क्षमता भएको ब्यक्तिमात्र अब सफल ब्यबस्थापक बन्न सक्छ । संकटको व्यावस्थापन गर्न सक्ने क्षमता व्यवस्थापकको आधारभुत गुण भित्र लिनुपर्दछ । परम्परागत ब्यबस्थापकीय सोच, शैली र नियमित कार्यले मात्र अब ब्यबस्थापकको सफलताको मापन हुन् सक्दैन ।
कार्य संचालन लागतमा कटौती, मिटिङ, सभा, गोष्ठीहरुमा कमी आउन सक्छः
संगठनभित्र हुने सभा, संम्मेलन, मिटिंगहरुअब टेलीकन्फरेन्स मार्फत वृहत रुपमाविस्तार हुने छ । हालै सार्क राष्ट्रहरुको राष्ट्राअक्ष्यहरुले कोरोना विरुद्धको लडाईमा साझा सहकार्य गर्ने गरेको टेलिकन्फ्रेन्ंस होस वा जी २० राष्ट्रहरूले गर्नेलागेको समेलन होस यसले के देखाउँछ भने अबका आउने दिनहरुमा दुइपक्षिय वार्ताहरु टेलिकन्फ्रेन्ंस माध्यमबाट हुने छ । कार्यालय संचालन खर्चहरु जस्तै कार्यालय सहयोगी कर्मचारी, घरभाडा, यातायातखर्च, लेखा कर्मचारीहरुको कार्यको पुनराबलोकन हुन सक्छ । कर्मचारीहरुको लागि आबस्यक ठुला ठुला घर तथा संहयोगी कर्मचारीहरुको लागि दुइ वा दुइभन्दा संगठन मिलेर साझा कर्मचारी साझा कार्यालयको अवधारणाले बिशेष महत्व पाउन सक्छ । प्रबिधिको प्रयोगमा जोड दिँदै नगदरहित वैकिङ सेवाहरुको संचालनमा द्रुतता आउने छ । नगद रहित सेवाहरुको प्रभाकारी उपयोग रविस्तार हुने छ. । समग्रमा भन्नुपर्दा यसले पेपरबिनाको कार्यालयको आबधारणा लाई विस्तार गर्न सहयोग गर्छ ।
कोरानाको संकटले केवलबिनास र निराशामात्रलिएर आको छैन यसले हाम्रो जिबनको कतिपय पक्षमा सकारत्मक प्रभाब पनि पार्दे छ र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सार्बजनिक सेवाप्रबाहको प्रभकारिता, हाम्रो ब्यबहारजन्य आनीबानीमा पनि सकारात्मक प्रभाब पार्दै छ । संगठनिक ब्यबस्थापकिय स्वरुप र शैलीलाई समयनुकुल परिबर्तन गर्दै सेवाप्रबाहलाई छिटो छरितो बनाउन मदतगर्दै छ ।
कोरोनाभन्दा सत्ता राजनीतिको भाइरस घातक
- नन्दलाल खरेल
मुलुक एकातिर कोरोना भाइरससँग जुघिरहेको छ भने अर्कोतिर सत्ता राजनीतिको घातक भाइरसबाट पीडित जनतालाई सुरक्षित राख्ने र भोकमरी हुन नदिने कार्य अहिले ओझेलमा परेको छ । लकडाउन एकतर्फि रुपमा जनतालाई लागेको छ, सरकारका लागि होइन । पीडामा रहेका आम जनताले आफ्ना पिरमार्कालाई वेवास्ता गरेर सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा रमाउने गतिविधि पक्कै पनि सजिलै भूल्ने छैनन् । अबको निर्वाचनमा ती दल तथा नेताहरु आफ्ना घर आगनमा आउँदा अहिले पाएको पीडाको प्रतिषोध देखाउने छन् । आम जनताले महामारीको यो लकडाउनको अवधिमा संक्रमितको पहिचान र परीक्षण तथा उपचारमा जोड दिनु पर्नेमा सरकारको ध्यान अन्य राजनीतिक दल फुटाउने र आफ्नै समयकालिन प्रतिस्पर्धीलाई उठ्नै नसक्ने गरी दमन गर्ने जुन हर्कत सत्ता नेतृत्वबाट भयो त्यो अत्यन्त निन्दनीय थियो । लकडाउनको वेला रातारात महोत्तरीबाट सांसद उठाएर पार्टी फुटाउन ल्याएको विषयले त विगतको सांसद–खरिद विक्रीको अापराधिक घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ ।
‘लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी' भनेझै संमृद्धिरुपी जहाज नेपाली मतदाताले दुई विपरीत ध्रुवका पाइलटहरुलाई उडान भर्ने जिम्म दिएका थिए । तर उनीहरुले यो समृद्धिको उडानलाई गन्तब्यमा नपुर्‍याई फोर्स ल्याण्डिङ अर्थात जबर्जस्त अवतरण गराएका छन् । आम जनतालाई थाहै छ , यो समृद्धिको उडानका प्रथम पाइलट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट संसदीय प्रणालीलाई उपयोग गर्न भनी उपभोगमा चुर्लुम्म डुबेका दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा आसिन छन् भने दोस्रो पाइलट सामान्तवाद र साम्राज्यवादलाई ध्वस्त गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने र त्यसको लगतै समाजवादी क्रान्तिमा अघि वढ्ने तथा सर्वहाराको अधिनायककत्व अन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सॉस्कृतिक क्रान्तिलाई चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्य साम्यवाद स्थापनासम्म जाने उद्देश्यमा होमिएका जनयुद्धका नायक क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई आफु सत्तामा जाने र त्यसको पटक पटक स्वाद लिने प्रचण्ड छन् । आज यिनै दुई पाइलटले आफ्नो सत्ता स्र्वाथको कारण मुलुकलाई गनतव्य तर्फ नपुर्‍याई गलत दिशा तर्फ पुर्‍याएका छन् ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा वारम्बार लगाइरहने प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको अँध्यारो छायाँमा अरुको पार्टी तोडफोड गर्ने षडयन्त्र किन गर्नु पर्‍यो ? के दुइतिहाई नजिकको वहुमतले पनि सरकारलाई कुनै काम गर्न अवरोध गरेको थियो ? कि कतै अर्को पार्टी फुटाएर दुई तिहाई वहुमतको सरकार पुर्‍याएर कतै प्रधानमन्त्रीले डरलाग्दा खेलहरु खेल्न खोजीरहेका थिएनन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ ।
सतारुढ नेकपा भित्र अहिले मुख्य तथा दुईवटा शक्ति केन्द्रहरु छन् - एउटा वालुवाटार र अर्को खुमलटार । भनीरहनु नपर्ला, बालुवाटारको सिंह ओली छन भने खुमलटारको अर्को सिंह प्रचण्ड छन् । यी हुँवै सिंहको पछाडि अन्य नेता तथा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरु दौडिरहेका छन् , आ–आफ्नो स्वार्थ पालेर । यी दुवै सिंहहरुले वेग्ला वेग्लै दम्भ पालेर बसेका छन् । ओलीमा आफु प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि भएकोले जतिसुकै वेला निर्णय गर्न पाउनु पर्ने दम्भ छ । प्रचण्डलाई भने आफु कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो कुर्सीसमेत अक्षांश र देशान्तर मापन गरेर राखिनु पर्ने दम्भ छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलोस भन्ने उनको चाहाना छ । हुनत विश्वमै कम्युनिष्ट पार्टी तथा संसदिय व्यवस्था भएको मुलुकमा पार्टीको निर्देशनमै सरकार चल्ने हो । तर यहाँ भागभण्डा मिलाउने हेतुले दुई अध्यक्ष प्रणालीको पद्धति विकास भएकोले यो समस्या निम्तन गएको हो ।
मुलुकले कोरोना भाइरसको सामना गरिरहेको वेला सरकारले दल विभाजन सम्वन्धि आध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएर नितान्न्त बेमौसमी बाजा बजाउने धृष्टता गरेको थियो । आज मुलुकलाई एकता र जनतालाई सरकारको प्रत्याभूति चाहिएको वेला राजनीतिक दाउपेचमा जानु देश र जनताको लागि ठूलो ग़द्दारी हो । जनतालाई सडकमा सुताएर भोकमोकै राखेर तिनै जनताको मतपाएर तिनकै पेट माथि लात्ती बजार्नु गम्भीर भूल मात्र होइन भयङ्कर अपराध हो । यसको मूल्य शासकहरुले ढिलोचाँढो एकदिन चुकाउनै पर्छ ।
लोकतन्त्रका लागि संघर्षका चरणमा सबै नागरिकले राजतन्त्र र निरंकुशतालाई पर्यायवाची शब्दका रुपमा बुझ्थे । त्यो वेलाको कालखण्ड थियो पनि त्यस्तै । लाग्दथ्यो, हामीलाई यो समाप्ति पछि निरंकुशतासँग लड्ने दिन समाप्त हुनेछ । तर त्यस्तो ठान्नु अकल्पनीय सत्य सावित भएको छ । मताधिकारको उपयोगबाट जनताले अनुमोदन गरेको लोकतन्त्रको नायवी अधिाकार लिएर वर्तमान शासकहरु निरंकुशताको निर्वस्त्र रुप धारण गर्न उद्यत देखिन्छन् । त्यतिमात्र होइन पार्टी भित्रको कचिंगलले उ आफै संक्रमित भइसकेको भान हुन्छ । नेतृत्व लिनेले आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउदै मैले त राम्रोसँग काम गरिरहेको थिएँ तर नेपालका सबै भिडियाले गलत समाचार समेटेको छ भनि बारम्बार आरोप लगाउन कदापि मिल्दैन ।
सरकार यतिवेला भाइरस नियन्त्रण गर्दै लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार कसरी गर्ने र विपन्न वर्गलाई कसरी मद्दत गर्ने भनेर योजना सार्वजनिक गर्न जुट्नु पर्ने हो । तर उ सत्ता राजनीतिको भाइरसले संक्रमित छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आएको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो वक्तव्यपनि त्यसैको श्रृंखलाको कडीको रुपमा देखिएको छ । वक्तव्यमा उनले अप्ठेरो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरता मच्चाउन खोजेको आरोप मात्र लगाएका छैनन् त्यस्तो गलत उद्देश्यका साथ भइरहेको प्रयासलाई किमार्थ सफल हुन नदिइने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषासमेत प्रयोग गरेका छन । उनले थप यो पनि भनेका छन्, ‘आफ्ना स–सत्ता स्वार्थ वा कुनै गलत उदेश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई विथोल्न र विगार्न खोज्छभने सरकार , नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनतालाई यो कीमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्ने मा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु ।’ यसरी सरकारका कार्यकारी प्रमुख कुनै डनको शैलिमा झै धम्कीपूर्ण भाषा आउनु कतै सरकार निरंकुशता तर्फ गइरहेको छैन ? प्रत्येक नागरिकले शान्त दिमागले सोच्ने वेला आएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा वैदेशिक रोजगार : विदेश जाने र रेमिट्यान्स दुवै घट्ने
अमेरिकामा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या एक लाख नाघ्यो, संक्रमित पनि १७ लाख माथि